Indlela Engcono kakhulu Yokuthola I-Botnet Malware Ngokusho Kwe-Semalt
I-Botnet malware inekhono lokukwazi ukuhamba amabanga nezindawo ezahlukahlukene. Kusho ukuthi inethiwekhi yeZombies kanye ne-bots ingahle ikhohlise inani elikhulu lezinhlelo emhlabeni jikelele. Leli khono lenza i-malnet ye-botnet inkinga yezwe, futhi imizamo yokulwa nayo idinga ukuthathwa ngokushesha ngangokunokwenzeka. UFrank Abagnale, i-8 (Semalt iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende, uchaza ukuthi i-malnet malware iyinethiwekhi yamakhompyutha anesifo. Zihlanganisiwe futhi ngaphansi kokulawula okugcwele kwe-spammer, hacker noma umhlaseli. Wonke amadivayisi ngabanye ayingxenye yale nethiwekhi abizwa ngokuthi i-bots.
Ukutholakala kwe-Botnet malware nokuvinjelwa kwayo:
Ukutholakala kwe-malnet malware akulula njengoba kuklanyelwe ukusebenza ngaphandle kokusitshela lutho mayelana nama-presence abo. Noma kunjalo, kunezindlela ezithile zokuzibona nokuzivimbela kalula.
1. I-traffic ye-IRC
Imithombo yezimoto ze-IRC ihlanganisa ama-botnets nama-botmasters asebenzisa i-IRC ukuxhumana nomunye
2. Umgwaqo ophezulu ophumayo we-SMTP
Umgwaqo ophezulu ophumayo we-SMTP kufanele uhanjiswe ngokushesha ngangokunokwenzeka.
3. Amathuluzi we-Anti-Botnet
Amathuluzi e-anti-botnet ahlanzekile futhi aqinisekise imiphumela ephezulu. Amawindi e-popup angalindelekile nawo abe uphawu lwe-malnet malware.
4. Ikhompyutha encane
Ikhompuyutha encane noma idivayisi yeselula ene-CPU ephezulu noma ukusebenzisa imemori kuyisibonakaliso se-botnet malware
I-Spike emgwaqweni ihlanganisa iPort 6667 esiyisebenzisela i-IRC, i-Port 25 esiyisebenzisela ama-imeyli ogaxekile, ne-Port 1080 esisebenzisa kuyo iseva ye-proxy
6. Imilayezo ephumayo
Imilayezo ephumayo ayithunyelwanga ngabasebenzisi bangempela. Eqinisweni, bathunyelwa ama-bots
7. Izinkinga ezinokufinyelela kwakho kwe-intanethi kanye nesivinini sayo
Uma uhlangabezana nezinkinga eziningi ezihlobene nokufinyelela kwe-intanethi nokuvinjelwa, amathuba ukuthi idivayisi yakho ihlaselwe i-botnet malware.
8. Uxhumano lwenethiwekhi
Ukusebenza nemisebenzi yenethiwekhi yakho kufanele ihlolwe njalo
9. Ama-patches e-software
Zonke izinhlelo zekhompuyutha yakho noma idivayisi yeselula kufanele zibuyekezwe ikakhulukazi izikhwama zakho zokuphepha kanye nezinhlelo zokulwa ne-malware
Abasebenzisi kufanele bavikele amadivayisi abo kusuka kubungozi obungozi kakhulu ngokufaka izinhlelo ezifanele nezinhlelo
Ukwakhiwa kwe-botnet malware online:
I-bot isakhiwe lapho ikhompyutha noma idivayisi yeselula isulele igciwane noma i-malware. Lokhu kuvumela abaduni belawula lelo divayisi kude, futhi awukwazi lutho ngalokhu. Abahlaseli noma abahlaseli abalawula ama-botnets babhekiselwa kubo njengabelusi bamabhodlela noma ama-botmasters. Abahlaseli noma abaduni basebenzisa amabhodnethi ngezizathu ezihlukahlukene; iningi lazo lisebenzisa i-bots namagciwane ama-cybercrime. Izicelo ze-botnet ezivame kakhulu ukuhlaselwa kwe-service, umkhankaso we-imeyili ogaxekile, ukweba kwedatha, ne-adware noma i-spyware.
Ukuhlaselwa kwe-botnet malware kuqala kanjani?
Ukuhlaselwa kwe-botnet kuqala ngokuqashwa kwamabhodlela. Ama-botmasters athola ama-bots ukuze asakaze izibungu, amagciwane, kanye ne-malware. Ibuye isetshenziselwe ukuphazamisa futhi ukuthelela inani elikhulu lamakhompiyutha angahle angaqukathi noma anikeze izinhlelo ze-antivirus. Amagciwane we-botnet axhuma kudivayisi yakho futhi alawule amaseva. Ukusuka lapho, abahlaseli bangakwazi ukuxhumana nokulawula amabhubhu, bewabela imisebenzi ethile. Lapho ama-botnets afinyelela usayizi odingekayo, abelusi bangasebenzisa ama-botnets ekufezeni ukuhlaselwa okuthile, njenge-server elayishiwe ngokweqile, ukweba ulwazi lomuntu siqu, chofoza ukukhwabanisa nokuthumela ama-imeyili ogaxekile.